KEDU ESI DOCHIE OGHERE NA EXCEL - EXCEL - 2019
Ịchịkọta oghere na Microsoft Excel
N'oge nleta na netwọk mmekọrịta gị na VKontakte, maka otu ihe ma ọ bụ ọzọ, ịnwere ike ịmeghachi ibe. Ọzọkwa, na nkọwa nke isiokwu a, anyị ga-akọwa ụzọ kachasị mkpa maka ịbigata saịtị ahụ.
A na-enye ọrụ na imelite ibe a na ihe nchọgharị Ịntanetị ọ bụla. N'okwu a, ị nwere ike ime ya n'ọtụtụ ụzọ, dabere na ọnọdụ a kapịrị ọnụ na mmasị onwe gị.
Usoro 1: Ihe Nchịkọta Ihe
Usoro kachasị mfe iji weghachite peeji nke VKontakte bụ iji menu nri-nri. Usoro a zuru ụwa ọnụ, a pụkwara itinye ya n'ọrụ na ihe nchọgharị ọ bụla nke Intaneti ọ bụla, mana enwere ike iche na aha ihe ndị ahụ achọrọ.
Mgbe ị nọ na ebe nrụọrụ weebụ ịkparịta ụka n'Ịntanet, pịa bọtịnụ òké aka ekpe ma họrọ Rụgharịa.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ghaghị imelite windo nchọgharị ihe omimi.
Ịnwekwara ike ịmegharia ibe a site na menu. PKM na taabụ.
Ọbụna nhọrọ doro anya - pịa Paintwork site na akara ngosi ahụ na akara ngosi melite na nchekwa ọrụ nchọgharị.
Na ibe a ịbudata site na iji ihe nchọgharị nwere ike mechaa.
Usoro 2: Hotkeys
Usoro nke abụọ nke imelite windo ahụ ga-achọ ka i jiri hotkeys nye ihe nchọgharị weebụ ọ bụla.
Hụkwa: Ntọala nyocha
Tupu ịmepe akụkụ ọ bụla nke saịtị VK, jide n'aka na nhazi cursor dị n'èzí ederede ederede. Ma ọ bụghị ya, ibe ahụ agaghị emelite.
Pịa igodo dị na keyboard "F5"mgbe e mesịrị windo ahụ ga-amaliteghachi.
Ụzọ a ga-enye gị ohere imelite ọ bụla na ibe netwọk, chọrọ oge kachasị elu iji kwụọ ụgwọ n'ihi iji data zoro ezo. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ nchịkọta zuru ezu nke saịtị ahụ, gụnyere ihe ndị e ji eme ihe mgbe nile, ọ kacha mma iji ụzọ ụzọ keyboard dịtụ iche.
Pịa igodo na keyboard n'otu oge. "Ctrl + F5" ma ichere ka windo mechie.
Na mmelite a, oge nbudata ga-amụba.
Otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, usoro nke iji mee ihe dị gị mma.
N'ihi mgbasa ozi nke ngwaọrụ mkpanaka, isiokwu nke imelite peeji nke nsụgharị mobile nke saịtị ahụ dịkwa mkpa.
Usoro 1: Nchọgharị
Ihe nchọgharị Intaneti, ma ọ bụ gbanwee maka ngwaọrụ mkpanaka, nwere obere nghọtahie n'etiti onye ọ bụla ọzọ karịa ihe nchọgharị maka PC. N'ihi njirimara a, omume ndị a chọrọ nwere ike ịdị iche.
Mgbe ị na-aga na saịtị VKontakte, n'elu ihuenyo ahụ, chọta ebe ntanetị ahụ ma pịa na akara ngosi akara ngosi, dabere na ihe nlereanya anyị na nseta ihuenyo.
Na ụfọdụ nchọgharị, ọ ga-adị mkpa ka ị mepee ngwa ngwa ma họrọ "Nwee ume".
Ọ bụrụ na ị na-eji ihe nchọgharị Chrome, ọ ga-ezuru ịpịgharịa na ibe. Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-enye gị akara ngosi mmelite ahụ, windo n'onwe ya ga-agbapakwa n'otu ụzọ ahụ dịka ngwa ngwa.
Na nke a, isiokwu nke imelite ibe dị na saịtị VKontakte nwere ike ịme ka emeghe.
Usoro 2: Ngwa
Ngwa ahụ anaghị arụ ọrụ dika ihe nchọgharị ma choro ntụziaka dị iche.
Iji aka, ngwa ahụ na-enye gị ohere igbanye naanị ụfọdụ n'ime isi ngalaba, gụnyere ndepụta ozi na ibe nkeonwe. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịpịgharịa gaa na ngalaba ahụ n'elu wee dọpụta ọdịnaya ahụ.
Ọ bụrụ na emere ihe niile n'ụzọ ziri ezi, akara ngosi ga-apụta na ihuenyo ahụ, iji mee ka ị mara maka ọganihu nke window.
Ihe ndị a dị n'elu anaghị emetụta akụkụ ahụ. "Ozi", n'ihi na a na-emelite ibe a ozugbo mgbe ị natara ozi ma ọ bụ mgbe oge ụfọdụ gasịrị.
Anyị nwere olileanya na mgbe ị gụsịrị ntụziaka dị n'elu, ị gaghị enwe ike imelite ibe. Anyị, mgbe anyị na-agbasasị ụzọ niile a na-anabata nke ịbubata saịtị VKontakte, kwụsị isiokwu a.
Nweghachi data mgbe ị nhazi na DMDE
Esi ewepu mgbasa ozi na Skype
Njikwa ActiveX na Internet Explorer
Imeri nsogbu ubiorbitapi_r2_loader.dll
N'ụzọ dị mwute, a na-akwụ ụgwọ mmemme antivirus ndị a pụrụ ịdabere na ya. Ihe na-adọrọ mmasị na nke a bụ Avast antivirus, nke bụ Avast Free Antivirus, ọ bụghị ihe dị ukwuu n'azụ nsụgharị nke ngwa a n'ihe gbasara arụmọrụ, na n'ozuzu ọ bụghị dị ala na ntụkwasị obi. GụKwuo
Esi esi jiri iPhone mee ihe
Mepụta PDF faịlụ online